स्टकको मूल्य स्थिर रहँदैन भन्ने खुला रहस्य हो। तिनीहरू उतारचढाव गरिरहन्छन्। यद्यपि, के तपाईंले स्टक मूल्यहरू कसरी निर्धारण गरिन्छ भनेर सोच्नुभएको छ? व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा, माग र आपूर्तिको शक्तिले सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दछ। माग भनेको मानिसहरूले किन्न चाहेको सेयरको मात्रा हो भने आपूर्तिले मानिसहरूले बेच्न चाहेको शेयरलाई जनाउँछ।
यसबाहेक शेयर मूल्य निर्धारण गर्नुअघि अन्य कारकहरूलाई पनि ध्यानमा राखिन्छ। तिनीहरू के हुन? आउनुहोस् पत्ता लगाउनुहोस्।
स्टक मूल्य निर्धारण
१. प्राथमिक बजारहरू
जब कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) मार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्छ, यसले लगानी बैंकरहरूसँग काम गर्दछ जसले स्टकको प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण गर्दछ। लगानी बैंकरहरूले कम्पनीको मूल्याङ्कनको आधारमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्छन्।
२. दोस्रो बजार – IPO पछि
आईपीओपछिको दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिले सेयरको मूल्य निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यदि कुनै कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेको छ भने लगानीकर्ताहरू यसको सेयरको स्वामित्वमा यसको हिस्सा बन्न चाहन्छन्। मागमा भएको बृद्धिले खरिदकर्ताहरूलाई उच्च मूल्यमा बिड गर्न स्टकको मूल्यलाई बढावा दिन्छ।
अर्कोतर्फ कुनै कम्पनीले राम्रो काम नगर्दा लगानीकर्ता सेयर बेच्न हतारमा हुन्छन् । यसले आपूर्ति बढाउँछ र बिक्रेताहरूलाई कम मूल्यमा बिड गर्न जान्छ जसले गर्दा यसको मूल्य घट्छ। स्टकको मूल्य निर्धारण गर्ने केही अन्य कारकहरू हुन्:
क)कम्पनीको शुद्ध आय र नगद प्रवाह
कम्पनीको वित्तीय विवरणले यसको स्टक मूल्यलाई असर गर्छ। सार्वजनिक रूपमा व्यापार गर्ने कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू घोषणा गर्न आवश्यक छ। यी मार्फत, तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कम्पनीले कति पैसा कमाउँदैछ र लामो समयसम्म आफैलाई टिकाउन पर्याप्त कोष छ कि छैन।
यदि वित्तीय स्थिति सकारात्मक छ भने धेरै लगानीकर्ताहरूले यसको सेयर खरिद गर्ने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा स्टक बजारमा यसको माग बढ्छ। माग बढ्दा मूल्य बढ्छ।
ख)जोखिम र पुरस्कार
कम्पनीमा लगानीको जोखिम र प्रतिफलले पनि यसको शेयर मूल्यलाई असर गर्छ। ठोस आधारभूत कुरा भएको स्थापित कम्पनीमा लगानी गर्ने जोखिम भर्खरै सञ्चालन सुरु गरेको कम्पनीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ। यसले सेयरको संख्याको माग बढाउनेछ र सेयरको मूल्यलाई धक्का दिनेछ।
सेयरको मूल्य निर्धारणमा लगानीकर्ताको भावनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि लगानीकर्ताहरू कम्पनीको दृष्टिकोणमा उत्साही छन् भने तिनीहरूले यसको सेयरहरू किन्ने सम्भावना बढी हुन्छ र यसको मूल्यहरू बढ्छ। अर्कोतर्फ, लगानीकर्ताहरूले कम्पनीलाई नकारात्मक रूपमा बुझेमा सेयर बेच्छन्। यसले अनिश्चितता र डरको हावा सिर्जना गर्छ जसले गर्दा स्टक मूल्यहरू क्र्यास हुने गर्दछ।